त्यसपछि गोपाल माग्ने भए, बिस्तारै सडक नै उनको संसार भयो ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारत्यसपछि गोपाल माग्ने भए, बिस्तारै सडक नै उनको संसार भयो !
त्यसपछि गोपाल माग्ने भए, बिस्तारै सडक नै उनको संसार भयो !
November 21, 2020 admin समाचार 2938
काठमाडौं : ५८ वर्षीय गोपाल परियार खुला मञ्चमा बाँडेको खानामा निर्भर हुन थालेको ४ महिना भयो। यही खानाकै भरमा सास धानिरहेको उनी सुनाउँछन्। ‘यहाँ खाना नपाएको भए त म मर्थेँ हजुर’ गोपाल दुखेसो पोख्छन्। उनी सुन्धारा को सडकपेटीमा लुगा सिलाएर जीवन चलाउँथे। दिनभरि काम गर्थे। होटलमा खाना खान्थे।
सडकपेटीमा सुतेर रात कटाउँथे। विगत सात वर्ष देखि यसरी नै घिस्रिरहेको थियो गोपालको जीवन । गत फागुनमा उनको लुगा सिलाउँने मेसिन चोरी भयो। उनको दाहिने हात दुखिरहन्थ्यो गत फाल्गुन ७ गते धेरै नै दुखेपछि उनी अस्पताल गए । डाक्टरले हातको सामान्य जाँच गरेपछि खाने औषधि लेखिदिए। औषधि बोकेर मेसिन राखेको ठाउँमा आउँदा मेसिन थिएन। उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए।
कसले लग्यो होला मेसिन? गोपाल अन्योलमा परे। उनले सात वर्षदेखि चिन्दै आएका ‘हप्पु’ नाम गरेका व्यक्तिले चोरेको अनुमान लगाए तर आफ्नै आँखाले नदेखेकाले किटेरै भन्न सकेनन्। जीवन धान्ने एउटै आधार त्यही मेसिन थियो। त्योपनि चोरी भएपछि उनको जिन्दगी झन् अनिश्चित बन्यो। अर्काे मेसिन किन्न पुग्ने पैसा पनि थिएन, गरिखाने अरु सिप पनि थिएन। गाह्रो, गह्रँगो काम गर्न ज्यान बुढो भइसकेको थियो।
के गर्ने कसो गर्ने अलमलमा परे उनी। के गर्ने कसो गर्ने भन्दैमा एक महिना बित्यो। को’रोना संक्रमणको ‘जोखिम भएको भन्दै सरकारले लकडाउन सुरु गर्‍यो । आफूसँग भएको अलिअलि पैसाले केही दिन काम चलाए । ल’कडाउन खुलिहाल्ला र केही उपाय लाग्ला भन्ने आशमा दिन बित्दै गयो। चिनेका केही होटलमा उधारो खान थाले। ‘कमाउने आधार छैन कतिदिन दिउन् होटलले खान ?’ गोपाल प्रश्न तेर्स्याउँछन्, ‘आफैंलाई लाज लागेर जानै सकिन ।’ सबै होटलमा गरेर खाएको १५ हजार तिर्न बाँकी रहेको उनले सुनाए।
कुनै विकल्प नदेखेपछि उनी संकटा मन्दिरको छेउमा माग्न बसे । तपाईंका कोही आफन्त छैनन् ? यो प्रश्न सुन्नेबित्तिकै गोपाल विगत कोट्याउन तम्सिए। कुनै समय उनीसँग राम्रो व्यवसाय थियो । माया गर्ने श्रीमती थिइन् अनि बा भन्दै अघिपछि लाग्ने सन्तान पनि । नियतिका केही खटन र आफ्नै केही कमजोरीका कारण गोपाल सडकमा आइपुगे र बिस्तारै सडक नै उनको संसार भयो। फरकधारमा कमल विष्टले लेख्नु भएको छ ।
पोखरीमा खसेर अड्कीएको भयंकर ठूलो नागको उद्धार गरिन् यि महिलाले
December 28, 2020 admin समाचार 2731
हेर्नुहोस,तपाईको हत्केलामा भएका यि रेखाहरूले देखाउँछ तपाईको भाग्य
January 17, 2021 admin समाचार 9750
नाडीबाट शुरू भएर माथितर्फ जाने रेखालाई भाग्य रेखा भनिन्छ । यो रेखा अनामिकाको मुनि पुगेर सकिन्छ ।हस्तरेखामा भाग्य रेखा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसबाट व्यक्तिको व्यापार, रोजगारीका साथै जीवनका सफलता एवम् असफलताबारे जान्न सकिन्छ ।
December 26, 2020 admin समाचार 1656
काठमाडौ । आरसि विश्वकर्माको ‘मगरनी मोरी’ नामक गीति एल्बमको रिलिजको लागि शुभ मूहुर्त छिट्टै जुराइदै छ । उक्त गीतमा स्वर आरसि विश्वकर्मा र ज्योति मगरको रहेको छ । गीतको लय र सिर्जना भने स्वयम गायक
LEX 18 agenda conversation: Job club (445172)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418735)
Hello world! (346046)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318838)